Mpanamboatra vy vita amin'ny vy matevina - Mpanamboatra vy vy vita amin'ny vy vy i Shina, orinasa
Black Oxide Mamatsy tariby vy vy
Black tariby tariby mainty tariby Mesh dia amboarina avy amin'ny tariby tariby vy matevina avo lenta, ny fitaovana dia ahitana AISI304, AISI316 ary AISI316L; Ny habean'ny tariby mainty Oxide dia afaka atao mifanaraka amin'ny volanao balrickade, lalamby na rafi-pandrafetana; Ny diagonal sy tsy miovaova dia mety hamboarina ihany koa.
Ny tariby vita amin'ny vy vy azo itarina (karazana savoka vita)
Ny vokatra vita amin'ny tariby vy matevina Flexible vita amin'ny famatsiana dia omena ao amin'ny andian-dahatsoratra roa: Inter-woven ary Ferrule Type. Ny vita an-tady vita eo anelanelan'ny tanana dia vita amin'ny tady vita amin'ny tanana izay vita amin'ny tady tsara sswire. Ny fanamboarana tady dia 7 x 7 na 7 x 19 ary vita avy amin'ny AISI 304 na vondrona AISI 316. Ity mesh ity dia manana tanjaka hafahafa, haingam-pandeha avo lenta, fangaraharana avo ary span malalaka.Ny tariby ss lozisialy izay manana habetsahana tsy azo tanterahina raha ampitahaina amin'ireo vokatra mesh hafa amin'ny lafiny maro toa ny azo ampiharina, fiarovana, fananana aestetika ary maharitra .. Ary izany no ankasitrahan'ny zaridaina indrindra. mpanaingo sy mpahay maritrano erak'izao tontolo izao.
Vatosoa vy vita amin'ny vy tariby (karazana ferrule)
Ny fantsom-bolam-bolo vy ferrule vita amin'ny vy matevina dia vita amin'ny tady sswire amin'ny karazan-javamaniry isan-karazany toy ny SUS304, SUS304L, SUS316, SUS316L sns ary ireo rafitra roa lehibe famoronana: 7 * 7 sy 7 * 19. tariby dia.1mm-4mm sy habe lehibe: 20mm-160mm. Ny andian-tsarera ferrule dia mizara ho bolongana alla metaly, vy matevina, varahina voapetaka ary varahina varahina miendrika «ferrule». Ny marika karazana ferrule, dia ampiasaina kokoa any an-tsaha toy ny balustrade amin'ny tetezana sy ny tohatra, ny fefy sakana lehibe ary ny rafi-pandehanana vita amin'ny facell trellis. Amin'ny maha-vokatra mipoitra ny haingo sy ny fiarovana ny maritrano, ny valala vita amin'ny vy matevina dia nanome ny haingon-trano maritrano sy ny teknikan'ny horticulture miaraka amin'ny singa vaovao sy manaitaitra, izay mihabe sy ankasitrahan'ny mpamorona sy ny mpanjifa manerana izao tontolo izao.